Xog: Sirta qarsoon ee heshiiska dekeda Berbera lagula wareegay + Sawirro |
Xog: Sirta qarsoon ee heshiiska dekeda Berbera lagula wareegay + Sawirro
Qoraal dheer oo uu qoray Wargeyska Geeska Afrika ayaa waxaa lagu qeexay qaar kamid ah Qodobadii ay ku heshiiyeen Maamulka Somaliland iyo Shirkada DP World ee laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta.
Heshiiska qodobeysan ee muujinaaya wareejinta maamulka dekedda Berbera ayaa ka koobnaa 3 qaybood kuna qoran Luqada Ingiriiska ayaa loo rogay Luqada Soomaalida si Heshiiskaasi ay u arkaan dadka Soomaaliyeed.
Heshiiskan waxaa bilowgiisa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in wixii war ah ee heshiiskan la xidhiidhaa uu yahay sir culus, waxa aanu dhinac kastaa ballan qaaday in warkan aan loo sheegin cid kale, marka laga reebo ciddii in ay heshiiskan faahfaahintiisa ogaataa lagama maarmaan u tahay dhamaystirka heshiiska, Ciddaasina ay noqonayso cid lagu magacaabayo heshiiskan ama sharci ahaan aan looga maarmayn in ay ogaato heshiiska.
Intaas kadib waxaa heshiiska lagu qoray in Maamulka Somaliland ay leedahay isla markaana tahay hawlwadeenka dekedda Berbera ee Somaliland, iyada oo arrintaas u igmatay maamulka dekeddaha Berbera.
Laakiin lahaanshiyaha dekedda iyo xuquuqda ka shaqaysiinteedaba lagu wareejiyo Hay’ad lagu magacaabay, Maamulka dekedda Berbera oo ah shirkad dekeddeed oo iskaashi iyo la shaqaynba la’ samaynaysa, shirkad lagu midoobey, balse cidda u dambaysa ee gebi ahaan iska leh ay tahay maamulka Somaliland.
Shida heshiiskan ku cad waxaa la dhisi doonaa shirkad tijaabo ah oo boqolkiiba 65 ay leedahay shirkadda dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta laga leeyahay ee DPW qayb ka mid ah oo lagu magacaabay FZE, halka inta soo hadhay oo ah boqolkiiba 35 ay yeelanayso Somaliland.
SHIRKADA DEKADA LAGU WAREEJINAAYO WAXA AY KA MAS’UUL AHAAN DOONTAA:-
1-In ay fuliso hawlo ballaarinta dekedda, oo ay ka mid yihiin dhismaha iyo ka shaqaysiinta dekedda hadda dhisan.
2-Dhismaha iyo ka shaqaysiinta furdado cusub.
3-Iyada oo dhammaan wax yaabaha dekedda lagu soo kordhiyeyna ay Somaliland yeelanayso mulkiyaddeeda u dambaysa.
SHURUUDAHA SOMALILAND LAGA RABO HESHIISKA RASMIGA AH:-
Sida ay dhinacyadu ku heshiiyeen shuruudaha hore waxaa iyagana raacaya oo lagama maarmaan ah in ay fulaan heshiiska rasmiga ah ka hor, shuruudaha ah:-
1-In uu marka hore dhaqangal noqdo oo uu shaqeeyo heshiiska saamileyda shirkadda cusub ee labada dhinac u abuurayaan maamulista dekedda Berbera iyo sidoo kale heshiiska adeegga maamul.
2-In Baarlamanku ansixiyo heshiiskan oo sida ku cad dhukumantigan Geeska Afrika uu helay lagu magacaabay Concession Agreement.
3-Qandaraas dhex mara maamulka iyo shirkad oo shirkadda xaq u siinaya hawlgelinta iyo ku shaqaynta ganacsi ama Hay’addo gaar ah, iyada oo aan ka baxayn xayndaabka shuruucda maamulka, isla markaana shuruudo gaar ah oo laga heshiiyey lagu xiraayo.
4-In xukuumaddu ay dhamaystirto ansixinta wixii sharci ahaan ansixin looga baahan yahay awood u siinta habaynta cashuuraha si waafaqsan Faqradda 18aad ee xaashida shuruudaha heshiiska.
5-In la arko caddaymo muujinaya in Somaliland ay si sharciga waafaqsan shirkadda ugu wareejisay dhammaan xuquuqdii lahaanshiyo iyo hawleed ee dekedda.
6-In Somaliland ay bixisay dhammaan rukhsadihii iyo fasaxyadii suurtogelinayey hawlaha ballaadhinta dekedda.
7-Waxaa Somaliland laga rabaa warbixin maaliyadeedkii ugu dambeeyey ee dekedda iyo warbixinnihii shaqo ee dekedda hore looga diyaariyey.
MAXAA SOMALILAND KA MAMNUUC AH INTA UU HESHIISKU SOCDO:-
Heshiiskani waxa uu xusayaa in muddada uu heshiiskani socdo aanay Somaliland u bannanayn in ay rukhsad siiso shirkad ama cid kale oo doonaysa in ay ka shaqayso rogista shixnadaha, gaar ahaan kontiinarada iwm.
Waxa kale oo ka reebban in ay dhisto ama horumariso dekedo cusub oo shaqo ahaan la tartami kara dekedaha Somaliland ee ay gacanta ku hayso shirkadda lagu wareejinayaa.
Zenegra buy online, acquire dapoxetine. LACAGTA WAREEJINT IYO AWOODA KORDHINTA TACRIIFADA DEKADDA:-
Heshiiska horudhaca ah waxaa ku cad lacag lagu magacaabay xaqal wareejinta oo ah lacagta aynu xaqal-qalinka ku magacowno ee heshiiskan oo kale marka uu dhaco ay shirkaduhu bixiyaan, waxaana dhukumantiga ku cad in Somaliland la siiyo lacag dhan 15 Milyan oo dollar oo 5 Milyan oo ka mid ahi ay noqonayaan qalab loogu talogalay in Somaliland uu ka caawiyo diyaarinta hawlaha wareejinta dekedda, kuna jiraan, Doonni nooca Taagga loo yaqaan iyo sidoo kale mid ah nooca Pilot ka loo yaqaanno, halka 10 ka Milyan ee soo hartana kaash ahaan loo siinayo Somaliland.
Sidoo kale waxaa shirkadda laga rabaa lacag sannadleh ah oo u qaybsanta laba nooc 5 Milyan oo go’an oo joogto sannad kasta la siinayo xukuumadda, lacagtaas oo lagu sheegay in ay duuduub ahaan doonto iyo lacag boqolkiiba 10 ah dakhliga ay shirkadda dekedda lagu wareejinayaa soo saarto.
Sidoo kale shirkaddu waxa ay xor u ahaan doontaa in ay ururiso dhammaan tacriifadaha laga qaadayo dadka isticmaalaya dekedda, ama iyadu toos ha u qaadato ama cid kale oo u ururisa ha u sii igmato, maamulka ayaana bixinaysa wixii ogolaanshiyo looga maarmi waayo hawshan.
MUSTAQBALKA SHAQAALAHA DEKADDA:-
Heshiiska horudhaca ah ee wareejinta maamulka iyo shaqada dekedda Berbera waxa kale oo uu ka hadlay mustaqbalka shaqaalaha hadda ka hawlgala dekedda oo ka mid ah arrimaha ugu xasaasisan, waxa aanu xusay hal qodob oo ah:-
1-In laga bilaabo maalinta shirkadda lagu wareejiyo dekedda ay shaqaalaysiiso shaqaalaha hadda ka shaqeeya dekedda, ee ay shirkaddu u aragto in ay ku habboon yihiin xilalka iyo boosaska ku habboon.
Xukuumadda Somaliland ayaa shirkadda lagu wareejinayo dekedda Berbera ka u magdhowaysa wixii sheegasho iyo xuquuq ah ee ay shaqaalaha dekeddu sheeganayaan heshiiska wareejinta ka hor.